Ntak emi Jos Brech ama ekenen̄ede ama? : Martin Vrijland
Akụkọ banyere Jos Brech, onye ebubo na-egbu egbu na onye na-emegbu Nicky Verstappen, na-agbasi elu. Ụnyaahụ, e bugara ya na Netherlands na ụgbọelu nke onwe ya. O nwere ike iri ụfọdụ! Enweghị ike ịchọta ụgbọ elu, n'ihi na anyị na-ekwu okwu banyere onye nwe ọgwụ ọjọọ na-egwu egwu nke nwere ike ịhapụ ndị enyi ya ma ọ bụ n'oge ọ bụla. Jos Brech, ma ọ bụ onye ga-aga n'ihu, o doro anya na a gaghị ahụ ya. Ụgbọ elu a na-echere anaghị adaba, n'ihi na mgbe ahụ, ndị mmadụ nwere ike ịhụ ihu ya ma mgbe ahụ, ị ​​gaghịzi enwe ike iji NVIDIA software tinker Hollywood style. Kedu! A na-adọba ụgbọelu na-agafe ngwa ngwa n'azụ ụlọ nzukọ na Schiphol. Otú ahụ ka de Telegraaf e kwuru banyere:
Ọ bụghị Eindhoven Air Base, ọbụnadị Maastricht Airport, ma 'dịka' ọdụ ụgbọelu dị n'ọdụ ụgbọ elu ebe, mgbe ogologo oge gasịrị, onye kasị chọọ na-abịa Netherlands. Obere ụgbọ elu ahụ nke onye a na-enyo enyo si na Barcelona gaa n'ala anyị ozugbo biara n'azụ ụlọ ebe a nyochare ụgbọelu.
Otu van nke kpuru ìsì kpaliri ụgbọ elu ahụ, ya na ole na ole ndị ọzọ na-eso ya. Mgbe ahụ, ọ gbara nkịtị gburugburu ebe dị na Thermiekstraat, bụ ebe a na-agba ọsọ ụgbọelu nke a na-ejikarị eme njem maka ụgbọ elu.
Cheedị na anyị ga-enwetakwa nkọwa banyere ihu Jos. Ma echegbula onwe anyị (anyị anaghị eche echiche ọzọ na nkwekọrịta) Jos ka na-abata na foto ahụ. Lezienụ anya! A sị ka e kwuwe, anyị bi n'oge 'Peter R. de Vries ikpe site na mgbasa ozi"Ya mere, akụkọ ahụ ga-anọgide na-eme ka a kwenye. Ọ bụghị ma ọlị ka anyị jụọ ajụjụ ahụ ma ọ bụ na e nwere ikpe ikpe; ọ bụghịkwa ajụjụ niile ma ànyị na-ekwu banyere mmegbu (n'ihi na ọ nweghị ihe NFI na-egosi na ntụziaka ahụ). Ee e, ọ na-emetụta nkwụsịtụ ọha na eze onye onye mgbasa ozi na-eme ka ọ bụrụ onye na - eme ihe (na ikpe nke na - ezigara Onye Ọhụụ). Echiche nke na NFI egosighi na igbu ọchụ ma ọ bụ mmegbu ma chọpụta DNA n'enweghị nkwado ọ pụtara na ọ dịghị ihe ọ bụla, anyị anaghị elo. Anyị achọghị ịnụ nke ahụ! Anyị chọrọ crucifixion na anyị amaworị onye ịghọ. Ihe niile na - eche echiche banyere ndị na - eche echiche na - eme mmanya na - egbu mmanya kpamkpam ga - abụrịrị otu ugboro.
M dere nke a na 31 August. Biko were nsogbu:
Ihe mepụtara nke wiilị, ígwè ụgbọ mmiri, ọkụ eletrik na Intanet bụ ọganihu, ma DNA nwere ike ịbụ ihe kachasị agbagha. N'ihi DNA a, anyị maara 100% na Jos Brech bụ onye na-egbu ma na-akwa iko Nicky Verstappen. Ya mere, ọ bụ ọkpụkpụ ọṅụ site na ụmị na ezinụlọ Nicky emesịrị doo anya. I nwere ike iche n'echiche na nne chọrọ ile onye na-egbu egbu anya n'anya!
Ị na-ahụ nsogbu ndị ọ nwere mgbe ịchọta DNA ma ọ bụrụ na 100% ihe àmà nke ihe a na-atụle? Ịkwado nkwado mgbe niile. Ịnọ ebe ebe apụtaghị na ị bụ onye na-egbu egbu ma ọ bụ onye mmegbu nwoke na nwanyị. Inwe mmekorita nke nwoke na nwanyi aputaghi na ekwesiri gi ikpe na ihe ojoo.
A ga-atụ anya na ị ghọwo ihe doro anya na nke a n'elu na ịchọta DNA anaghị ekwu ihe ọ bụla gbasara mpụ. N'ihe banyere Nicky Verstappen, dịka ọmụmaatụ, akụkọ nopụ nke NFI adịghị egosi na e gburu ya. Ọzọkwa, ọ dịghị ihe akaebe na-egosi na enwere mmegbu. Ya mere, ọ bụ ya mere ị ga-eji tụnyere ihe ị kọwara n'elu ya na onye agbata obi gị.
Ịchọrọ ịkwụsị n'ọnọdụ dị otú ahụ n'ọdịnihu? Ọ bụrụ na iwu ọhụrụ ahụ ga - abịa n'oge na-adịghị anya - ekele maka usoro mgbasaozi mgbasa ozi na emobuilding site n'aka Peter R. de Vries -, ị ga - enwezi ntutu isi na globa mgbe ị ga - aga kọfị na onye agbata obi gị.
Nchịkọta akụkọ Nicky Verstappen 29 June 2001:
Ma ọ bụrụ na ị hapụla ya, m na-atụ aro ka ị nyochaa ọnọdụ dị ugbu a n'ọhịa nke ihe okike. Naanị n'ihi na o kwere omume nakwa n'ihi na ọ nwere ike ịba uru ịmara ihe gbasara ya.
Ọ bụghị naanị na anyị nwere ike ịme mmadụ ka ọ nọrọ nyocha na 2016 na, na ozugbo, jiri ihu na olu onye ọzọ na - ahụ ya (lee ebe a), NVIDIA software nwere ike ịmepụta ndị na-adịghị adị adị (lee n'okpuru). Ma bah, n'ezie anyị na-achọghị na-anụ na na niile! Ejila bran mee ihe banyere onye omekorị-ego-ego-ukwu ma ọ bụ ihe yiri nke a. Bibie ya! Egwuregwu! Anyị chọrọ ịhụ ọbara. Njikere! Jikọọ na ọbịa ahụ! Ma ugbu a, ọ dị mkpa na mberede ka a chọrọ inye DNA onyinye, ọ bụghị iji swipe.
Gụọ faịlụ niile ebe a
Tags: by, onye ndu, agba, Jos Brech, etiti, igbu ọchụ, Nicky Verstappen, Peter R. de Vries, onwe, ikpe, eche, ụgbọelu
7 September 2018 na 01: 05
Akụkọ a na-enweta crazier. Onwa September September 6, Betweter Peter R. de Vries na-ekwu na Jos Brech adịghị etinye aka na nyocha DNA nke dị omimi. Kedu ka a ga - esi 'ebibi' DNA ọtụtụ afọ gara aga n'ihi na ọ dịghịzi mkpa?
7 September 2018 na 18: 45
Ekeme ndidi akpan mfịna edi ke nnyịn ididụn̄ọde ke ererimbot emi. Anyị nwere ike ịrị elu ma ọ bụ dị ala, ma ọ bụrụ na ịgaghị n'ime ya iji chọpụta eziokwu nke gị, ị na-abawanye ma ọ bụ na-efu. N'ezie, ihe niile bụ ihe efu.
Ọ dị ka à ga-asị na ụwa adịghị njikere maka ịtụgharị uche, ma ọ bụ kpọtụrụ mkpụrụ obi.
Ogologo oge ị na-adịghị njikere ịga n'ime, ọ na-akwụsị.
Dị ka Martin ghọtara n'ezie.
Enwere otu. 1
" Na-eme mkpesa megide conspiracy na Tom Kleijn
Elon Musk banyere ngosiputa mgbochi, nchekwube na 'njem' »
Nleta ha: 4.180.486